Ihe oyiyi ọhụrụ egosipụtara nke Pixel 3a na Pixel 3a XL na-abịa n'ìhè | Androidsis
Google dị njikere ịmalite smartphones ọhụrụ ya n'etiti, nke ga-abụ nke Pixel 3a na Pixel 3a XL ọnwa na-abịa. N'ihe metụtara, ụlọ ọrụ ahụ kesara teaser ịntanetị na nso nso a nke na-ekwu nke ahụ ihe ohuru na-abịa na onwa asaa.
O doro anya na Google anọwo na-egosi na mwepụta nke usoro Pixel ya na-echere ogologo oge n'etiti smartphones. Ugbu a, tupu ikike nke duo a, nsụgharị ọhụrụ nke ngwaọrụ abụọ a apụtala na ntanetị. Ka ahụ!
Nke a bụ imewe nke Google Pixel 3a na 3a XL
Nsụgharị ọhụrụ nke Pixel 3a na 3a XL
Foto dị n'elu, nke nwere ngwaọrụ abụọ ahụ, na-egosi nke ahụ ga-eji nnukwu bezels gburugburu ihuenyo ahụ. Ihuenyo nke ndị a anaghị eweta ụdị notch ọ bụla. Na mgbakwunye, a kọwara n'ụzọ zuru ezu na ha ga-eji jaket ekwe ntị 3.5mm, nke etinyere n'elu ekwentị.
N'ihe gbasara imewe, ma smartphones bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu. Ọ dịkwa ka ha nwere bezel ala nke otu nha (agba), nke nwere otu ọkà okwu. N'aka nke ya, ọ bụ ezie na ọ dị ka ha hà nhata, n'ụzọ ezi uche dị na ya na Pixel 3a XL na-atụ anya ibu karịa Pixel 3a.
Dabere na ntapu ndị gara aga, Google Pixel 3a ga-eji ihuenyo 5.6-inch nwere mkpebi ihuenyo 2,220 x 1,080-pixel FHD, ebe Google Pixel 3a XL ga-egosipụta ihuenyo 6-inch nwere mkpebi 2,160 x 1,080 pixel. .
Ego nke Google Pixel 3a na Pixel 3a XL na Canada ka edozichara. Nzụta gị ọ ga-aba uru?
A na-atụ anya na smartphones abụọ ahụ ga-enwe 4GB nke RAM ma nwee 64GB nke nchekwa dị n'ime, yana Pixel 3a na-akwado ya. Snapdragon 670 na 3rd XL maka Snapdragon 710.
Akụkọ na-egosikwa na ngwaọrụ ndị dị n'etiti Ha ga-eji otu igwefoto n'azụ 12.2MP nke a hụrụ n'azụ Pixel 3 ahịrị adịchaghị. Ahụmahụ igwefoto n'ozuzu ya nwere ike ịbụ ihe Google ga-elekwasị anya na ụdị ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe ngosi ọhụụ nke Pixel 3a na Pixel 3a XL bịara na-apụta